Vahoaka misy saina ny malagasy | Pakysse
Archive for the ‘Vahoaka misy saina ny malagasy’ Category
juin 19, 2014 in 2014, Antsahamanitra 22 jiona, Bigga Tovo, Citizen journalism, Drepanocytos, Fahantrana, Fanasoavana, Fandraisana andraikitra, Fanehoana hevitra, Fiainam-pirenena, Hira gasy, Internautes, internet, Kolontsaina Mainty, Kolotsaina mainty, Madagasikara, Malagasy, nTIC, Revolution web2.0, T4D-M4D, Toe-tsaina mila miova, Vahoaka misy saina ny malagasy, Volunteering, Web 2.0
Bigga Tovo; Bandin’Karnaz
1 – Manomana hetsika ny kolontsaina mainty ao Antsahamanitra ny 22 Jiona ho avy izao. Afaka omen’ialahy fanazavana misimisy ve ny mpanaraka ity blog ity ra Big?
Salama daholo ary faly miarahaba ny mpitsidika sy mpamaky ity blog ity. Ie manomana hetsika maimaimpoana ny label « Kolotsaina Mainty » amin’ny alahady izao ao Antsahamanitra amin’ny 1 ora talakandro « zaza rap taiza » no anarany. Hetsika natao hampafantarina ny Malagasy ny ady amin’ny drepanocytose. Satria anio alakamisy 19 jiona ny andro iraisam-pirenena aminio areti-mandoza io manerana izao tontolo izao. Ny drepanocytose moa dia aretina manaranaka ny rà (sang) ka miteraka tsy fahatomombanan’ny fiarovana ao amin’ny vatana. Marihina fa ny hetsika « Zaza Rap Taiza » izay atao ny alahady izao dia hetsika maimaimpoana tsy misy vidim-pidirana ka ny fahatongavanao ao no maneho ny fanohananao ny ady atao amin’ity aretina ity. Raha misy moa ny mila fanazana fanampiny dia tsidiho ny pejy facebook Zaza Rap Taiza , na ny http://www.kolotsainamainty.com
2 – Ny fifandraisan’ny drepanocytos sy ny kolontsaina mainty mivohy ny HH?
Ny fifandraisan’ny « Kolotsaina mainty » amin’ny ady atao amin’ny drepanocytose eto Madagasikara izay iandreketan’ny Ong LCDMF dia fiaraha-miasa maimaimpoana sy fifanampiana. Izany hoe ny « kolotsaina Mainty » dia mihezaka manao izay vitany, sy mampiasa izay traikefa kely hanany amin’ny fampafahatarana ny ONG LCDMF. Ny « Kolotsaina Mainty » moa dia label mozika urbaine izay hivondronan’ny artiste sy fikambanana maromaro toa an-dry Kougar, karnaz,… Ny zavatra tsapanay dia ny tsy fahampian’ny ady atao amin’ny drepanocytose nohon’ny tsy fahafantaran’ny olona ilay aretina satria marihina fa ny fangalana rà ihany no hafahana mahafantatra azy ity. Ny zazakely no tena voan’izy io. Raha tsy hiteny fotsiny ny eto afrika isika dia 300.000 isan-taona ny zaza teraka mitondra an’io aretina io. Izaho manokana dia mino sy manatena foana fa ny ankizy no hoavin’ny firenena ka ny fitsinjovana ny fahasalaman’izy ireo dia tokony ataon’ny fanjakana vaindohan-draharaha. Raha ny marina dia tsy izahay mpihira rap majinika kely aty no tokony hanao an’izao fa tokony asan’ny fanjakana. Nefa moa rehefa tsy hanao ny fanjakana, dia raisinay ny andraikitra satria mampalahelo ihany ny mahita fa mbola misy ny zazakely matimaty fahatany noho ny tsy fitiliana na ny tsy fahafantarana ara-potoana ny aretina mahazo azy izay azo tsabona tsara. Misy moa ny hira noforon’ Kougar izay atolotra ho an’ireo zaza tratran’ny drepanocytose.
3 – Bandy sy sipa maro no ampirevy mandritra ny hetsika. Hafatra fohy?
Eka! groupe eo amin’ny fito eo no ampirevy ao Antsahamanitra amin’ny alahady izao. Isan’izany i Kougar zanak’i Thiera Bruno, ho avy ao koa i Dadlah, Ben J kofa dahopp, ao koa i Joudas bandy revelation avy any Toamasina, ho avy ao koa moa ny tarika Karnaz izay misy ny tenako, ho avy ao koa i Psykopasy avy amin’ny Xcrew. Hanafana ao ihany koa ry Jiolamb’ups izay isan’ny fikambanan rap misondrotra amin’izao, ary ny fikambanana farany dia ry Martiora freedom izay fikambanana « coup de coeur » ankafizin’ny tanora amin’izao fotoana izao. Nihezaka moa ny tena miaraka ireo ekipa mba ho ho tafiditra ao daholo ny « genre sy tendance » eo amin’ny mozika black rehetra misy eto amintsika. Mbola haveriko ihany fa hetsika tsy handoavam-bola ny amin’ny alahady ka dia asaina daholo ianareo tia mozika sy liana te hanampy na te hahafantatra bebe kokoa momban’ny ady atao amin’ny drepanocytose eto Madagascar izay mahazo ny 9% ny malagasy.